UMBRELLA ACADEMY ကဲ့သို့သောပြပွဲများ - နောက်တစ်ခုကြည့်သင့်တဲ့အရာ - သတင်း
အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီအခြားအရာတစ်ခုခုသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ဝန်ထုပ်များသည်ဖြစ်ပျက်သည်။ ဇာတ်ကောင်များသည်ချစ်စရာကောင်းသော၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ အင်အားကြီးမားပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အနီးကပ်ပြီးပြည့်စုံသောစီးရီးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်ကြည့်နေစဉ်သင်ထင်မြင်သည်မှာထီးအကယ်ဒမီနှင့်တူသောပြပွဲမရှိပါ။ ဘယ်ဟာနှစ်ဖက်စလုံးကဓားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသလဲဆိုတာကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးသလောက်အဆုံးသတ်ပြီးတစ်ချိန်ကမင်းကအရမ်းစိတ်မသာညည်းတွားပြီးသင်ဟာဘယ်တော့မှမကြည့်ဖူးဘူးလို့သင်ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည်အတိုင်း, ဒါပေမယ့်မှာလုံးဝကိုခစျြဖူးဘူးထက်ကိုချစ်၏နှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖို့ပိုကောင်းတယ်။
မင်းကောဘာကောင်းလဲသိလား တစ် ဦး ကပြန်ခုန်ထွက်။ ကောင်းသောအဟောင်း, sexy, ပျက်ပြယ် - ဖြည့်ပြန်ခုန်ထွက်။ ထိုအခါ Umbrella အကယ်ဒမီဘို့အများကြီးရှိပါတယ်။ အတော်လေးတူသောဘာမျှမရှိပါတယ်အဖြစ်အများကြီး, နာကျင်မှုသက်သာစေရန်ကူညီရုံအလုံအလောက်ဆင်တူဖြစ်ကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အင်အားကြီးမားသည့်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပြသသည်။ အဆင်ပြေသည့်အသွင်အပြင်ရှိသောသမားရိုးကျမဟုတ်သောထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောမိသားစုများနှင့်ပြသသည်။ Umbrella Academy ကဲ့သို့သောတီဗွီအစီအစဉ်များအားလုံးဤတွင်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါသိသာရဲ့သိပေမယ့်နှစ်ခုဖြစ်ကြသည် အခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင် ။ စွမ်းအားများ၊ Robert Sheehan၊ UA မှအစားထိုးရန်သင်လိုချင်သည့်အရာအားလုံး။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ရရှိပါသည် ဒါပေါ့ ကျွန်တော်တစ် ဦး ရေးသားခဲ့သည်အများအပြားတူညီ ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံး ထိုအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရန်လိုအပ်သည် (သတိပြုပါ၊ Misfits ကိုမတွေ့ပါကဖျက်လိုဖျက်ဆီးသူများရှိသည်။ ) ။ Misfits အားလုံးကို All4တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Hill House ၏သရဲခြောက်တဲ့
တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ရပ်များ၊ sexy ဆူညံသံမိသားစုများ၊ သူတို့နေထိုင်ခဲ့ကြသောကြောက်မက်ဖွယ်ခမ်းနားသောအိမ်ကြီး…အကျွမ်းတဝင်ကောင်းသောအသံ? သငျသညျက၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်စဉ်အတွင်းကသုတ်ခြင်းနှင့်ဟုတ်ကဲ့, က Netflix ကအပေါ်မပြုခဲ့ပါလျှင်ဟေးလ်အိမ်၏ Haunting ၏ယူအက်စ်အေအဘို့ကြီးစွာသောအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစရရှိပါသည် 'မင်း' မှအချစ် အထဲတွင်!
ဤနေရာတွင်နောက်ပြန်လှည့်သွားသော်လည်းအနည်းငယ်သောသူရဲကောင်းများသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စ၍ စူပါပါဝါများတီထွင်ထုတ်လုပ်သည့်မြို့တစ်မြို့မှလူတစ်စုအကြောင်း (၂၀၀၆ မှလူတိုင်းကြည့်ရှုခဲ့သည်) နှင့် ၎င်းတွင် Gilmore Girls မှ Hayden Panettiere နှင့် Jess တို့ပါ ၀ င်သည်။ PLUS ရဲ့အခု BBC iPlayer မှာရနိုင်ပါတယ်၊
ကြည့်ရှုတော်မူပါ။ သငျသညျ The Umbrella Academy ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသူတို့သည်သဘာဝအလျောက်အစားထိုးနေသည့်သူဖြစ်ပါက Stranger Things ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ... ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်း Stranger Things ကိုမြင်ကြပြီ။ ဒီတော့ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ငါဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ် Stranger အရာများကိုဖန်တီးသူများနှင့်ကမ္ဘာ၏ F *** အဆုံး၏အဆုံးမှဖြစ်ပြီး, ၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဒါဟာ၏အဓိကသွန်း (2017) နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအင်မတန်ထူးဆန်းတယ်၊ Stranger Things and The Goonies နဲ့တူတယ်၊ အရမ်းလှတယ်၊ တေးသံလည်းကောင်းတယ်။ တိုတိုနှင့်လွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူကောင်းသော combo တွေအများကြီးနှင့် Netflix ပေါ်မှာ၎င်း၏အားလုံး။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့
The X Men စီးရီး
အဆင်ပြေမဟုတ်ပြပွဲ, သူတို့ကရုပ်ရှင်ပါပဲ, ဒါပေမယ့်အပေါ်လာ: Umbrella အကယ်ဒမီ The X Men ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ပြထံမှဤမျှလောက်ချေး, အဲဒါကိုလျစ်လျူရှုရန်မှားပါလိမ့်မယ်။ X Men ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း (OG ရုပ်ရှင်များ၊ X Men နောက်မှမည်သည့်အချိန်တွင်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါ - စိတ်မကောင်းပါဘူး) ယူအက်စ်အေ၏ပျက်ပြယ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမှန်တကယ်ကူညီလိမ့်မည် - ကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။ ဒါ့အပြင်၎င်းမှာ Ellen Page ရှိတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ခြင်း၊ စွမ်းအားများ၊ လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားတာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် - Shadowhunters တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများကိုနာမည်တူစာအုပ်များပေါ်အခြေခံပြီးကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့နတ်ဆိုးများကိုလိုက်ရှာသည့်သဘာဝလွန်တီဗီရှိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အချို့သောကောင်းမွန်သော LGBTQ + ကိုယ်စားပြုမှုအပြင်လူတိုင်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်သည်။ သငျသညျအခြို့သောပိုပြီး Robert Sheehan စိတ်ကူးနေလျှင်မည်သို့ပင်ဆို - Lily Collins နှင့်အတူရုပ်ရှင်ဗားရှင်းကိုကြည့် - သူကထဲမှာပါပဲ။ အဆိုပါပြပွဲ Hulu အပေါ်စီးဆင်းနေသည်, ရုပ်ရှင်အပေါ်ရရှိနိုင် ... ငါထင်, လိုက်တယ် ... YouTube ကို?
Umbrella Academy ကဲ့သို့ရှိုးပွဲများကိုသင်ရှာဖွေသည်၊ သို့သော်သင်ကခြေဆွံ့သူ၊ လူသာဟားဂရီးဗ်မဟုတ်သောနည်းဖြင့်စူပါအစွမ်းတန်ခိုးစွမ်းအားကိုသရုပ်ဖော်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ရှာဖွေနေသလား။ ငါနဲ့အတူလာပြီးဂျက်စီကာဂျုံးစ်လောကကိုဝင်ပါ။ ပထမ ဦး စွာအနေဖြင့်၊ မိန်းမတစ်ယောက်မှာစူပါအစွမ်းခွန်အားပါ ၀ င်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါ့အပြင်ဒေးဗစ်တီနန်တ်၏အကျင့်စရိုက် (မြင့်မားသောအဓိကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသူ) နှင့်ကြီးမားသောကြံစည်မှုပုံစံအချို့ရှိသည်။ ကိုယ့်အလွန်အမင်းကပါးရိုက်အနည်းဆုံးပထမ ဦး ဆုံးစီးရီးကြိုးစားနေအကြံပြုချင်ပါတယ်။
• Misfits နှင့် The Umbrella Academy တို့အကြားတူညီမှုအားလုံး၏ပြည့်စုံသောစာရင်း
•ဤသည်မှာ Umbrella Academy ၏သရုပ်သကန်သည်စစ်မှန်သောဘ ၀ ၌အသက်မည်မျှရှိသည်
• PSA: ထီးအကယ်ဒမီမှနံပါတ်ငါးသည်ဂီတကိုပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်
မိန်းကလေးတစ် ဦး squrit အောင်ဘယ်လို